Fiainana mpanakanto :: Nametraka fepetra tamin-janany amin’ ny fanaovana mozika i Olombelo Ricky • AoRaha
Fiainana mpanakanto Nametraka fepetra tamin-janany amin’ ny fanaovana mozika i Olombelo Ricky
Efa hatramin’ny fahakeliny no nilomano tao anatin’ny mozika I miaro tanjona. Isan’ny nanolokolo azy tamin’izany I olombelo ricky, ray niteraka azy. Mihamandroso hatrany izy ankehitriny ka efa manana ny tarika azy manokana sy mitondra ny anarany. Tsy nanakana azy ny rainy, saingy kosa nametra fepetra sy fifanarahana tamin’I miaro tanjona.
Hianatra sa hanao mozika? Ireo no safidy teo anoloan’i Miary Tanjona , mpanakanto tanora sady zanak’ilay artista fanta-daza, Olombelo Ricky. «Nanambara tamiko ny raiko fony aho mbola kely fa sarotra ny fiainan’izany mpanakanto izany. Tsara ny misahana asa hafa sy mandranto fianarana ambony mba hahafahana mivoatra kokoa amin’ny fiainana. Teo aho no nianatra momba ny serasera sy nianatra teny vahiny. Nanosika hatrany anefa ilay mpanakanto ao am-parahatoka ka ny mozika ihany ankehitriny no tena asa sahaniko ary tiako hivelomana. Nanampy ahy kosa ny fianarana izany nataoko ary hisaorako ny ray aman-dreniko nanampy ahy tamin’ izany», hoy i Miaro Tanjona.
Nanapa-kevitra ny hampivady ny fianarana sy ny maha mpanakanto i Miaro Tanjona. Tao anatin’ny fepetra napetraky ny rainy, i Olombelo Ricky, rahateo ny hananana fahaizana amam-pahalalana hahafahana mivoy kanto manana fanahy sy manaja ireo kolontsaina malagasy, fa indrindra afaka ny hipaka amin’ny olona rehetra maneran-tany.
Fanirian’ny ray aman-dreny hatrany mantsy nyhahita ny zanany ho tafita sy hanohy ny fianarany hatramin’ny farany. Misy aza ireo mametra ny sehatra asa izay hosahanin’ ny zanany any aoriana any. Tsy mba toy izany kosa ny nitondran’i Olombelo Ricky an’ity menaky ny ainy.
« Ny mozika efa tao anatin’ny rany. Tsy afaka ny hametra ny amin’ny tsy hanaovany mozika izahay ray aman-dreny. Ny hany torohevitra nomena fotsiny dia ny hanovozana fahalalana maro samihafa hahafahany mamiratra hatrany amin’ny mozika izay ataony », hoy i Olombelo Ricky manazava.
Nandalo tarika maro izy talohan’izany. Isan’ireo mpitendry ao amin’ny tarika Olombelo Ricky ihany koa. Nametraka lova goavana ho azy ny rainy. Tena safidy lehibe indrindra teo amin’ny fiainany ny ho mpanakanto matihanina sy hivelona amin’ny mozika ataony.
Mpihira ankiafiziny indrindra i « Dada »
Ny fitendrena amponga no tena nahalalana an’ i Olombelo Ricky, hany ka nanaraka ho azy ny fahaizan’i Miaro Tanjona an’io zavamaneno io. Fony fahakeliny no efa nivelively latabatra teny izy, araka ny fitantarany. Feno folo taona izy no nahazo amponga voalohany avy tamin’ny rainy. Teo no nanomboka nively amponga i Miaro Tanjona. Tsy nijanona intsony hatramin’izao.
« Olombelo Ricky ihany no mpihira ankafiziko indrindra. Manana ny lazany izy. Manano sarotra ho ahy ihany ilay hoe zanaky ny andrarezin’ny mozika malagasy izany. Mamolavola ny gadona izay ataoko ireo mozika ataony. Na dia mankafy tanteraka ny mozikany sy ny fanahy voiziny aza aho, dia tsy nahasakana ahy tsy hankafy mpanakanto hafa kosa izany », araka ny fanazavan’ity tovolahy ity.
Tafiditra ao anatin’ny lisitr’ireo mpanakanto hakany aingam-panahy i Baba sy Dedesse amin’ireo mpihira malagasy. Fihainony hatramin’izay ka mandrake ankehitriny kosa ry Stevie Wonder, Otis Redding, Marvin gaye…
Nanomboka teo amin’ny faha-15 taonany no niditra tao anaty tarika i Miaro Tanjona. « Kinambara » no nisantarany ny lalany teo amin’ny fiakarana andampihazo. Tao anatin’ny « Vazimba Vocal » izy, avy eo. Nandalo tao amin’ny « Zanaray Percussion » ihany koa.
Tamin’ny taona 2010 no niara niaka-tsehatra tamin’ i Olombelo Ricky izy nandritra ny “Manala Azy 2009”. Izy no nanokatra ny sehatra tamin’io fotoana io.
« Nofinofiko efa hatramin’ny ela ny hoe hiaka- tsehatra. Faly sahirana aho satria tojo tamin’ilay nofinofy nefa rehefa tena tafakatra teny an-dampihazo dia nipoitra teny ilay tahotra », hoy i Tanjona raha nanazava ny dingana goavana voalohany amin’ny maha mpanakanto azy.
Ny tarika « Mpaka fo », niarahany tamin’i Jahleky, nanomboka ny taona 2017, kosa no hahenoana an’ireo sanganasany voalohany. Fifampizarana no ataon’izy mirahalahy ka samy manana hira folo avy eo ry zareo, izay entiny miantsehatra anaty seho takariva samihafa.
Efa manana hira maromaro i Miaro Tanjona ankehitriny. Isan’ny ankafizin’ny tanora manokana ilay « Fitia hafa kely ». Tsy mbola manana vina ny hamoaka rakikira aloha izy hatreto fa hamoaka hira tsikelikely eny, mba hahafahan’ny mpankafy manaraka ny fivoaran’ny kantony.
Fehezin’ity mpihira ity ho mozika mivelatra sy maroloko ary misokatra amin’ny gadona rehetra ny mozikany, eny fa na dia misy itovizana amin’ny gadona ataon’i Olombelo Ricky aza. Efa mizara ny fahaizany izy ankehitriny satria mampianatra amponga ho an’ireo liana rehetra.
Taorian’ny fanovozany fahalalana maro samihafa, dia nanana fitiavana manokana tamin’ny fanatanjahantena ny tovolahy. Nisy fotoana no nieritreretany ny ho matihanina amin’izany. Ny fikolokoloana hozatra na « Body Building », ny fibatana fonjam-by, ny haiady Aikido, ary ny basketball no tena nimasoany. Tsy fitiavana vao nitsiry tsy akory ireo fa efa tao anatiny foana hatramin’izay.
Nanosika azy mafy kosa ny fitiavana mozika ka nampandeferiny ny fanatanjahantena. « Tena tiako ny hazakazaka. Efa saika hanao fifaninanana momba ny « Body Building » ihany koa aho tamin’ny taona 2014 fa noho ny tsy fahasalamana nihatra tamiko dia voatery najanona. Tena ankafiziko koa ny basket-ball. Nofinofiko ny ho tafiditra tao anatin’ny ekipa nasionalin’ny basket- ball. Manana tepana mainty amin’ny Aikido kosa aho hatramin’izao », hoy ihany izy sady mitsiky.
Tia ny hainahandro i Tanjona, ankoatra ny fanatanjahantena. Fahafinaretana ho azy ny mikarakara sakafo, avy eo mankafy an’izay vita. Hafatra apetrany amin’ireo tanora toa azy, ka mikasa hanao mozika, ny fikirizana hatrany amin’ny zavatra tiana sy hanolorana mozika raitra foana. Ampirisihiny indray ireo ray aman-dreny amin’ny fanohanana an’ireo tanora amin’ ireo zavatra tiany rehetra.
Fanatsarana ny fanabeazana :: Hampivondrona ireo manohitra ny fanovaovana ny PSE ny hetsika “Rohy”
Fanolorana ny politikam-panjakana tetsy Tsimbazaza :: Mitaky ny fanatanterahana ny velirano ireo solombavambahoaka